Hita Ho Tsy Tantin’ireo Vehivavy Venezoeliana Ny Tenitenenin’ilay Vehivavy Vadin’Olona Ambony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 13:33 GMT
Diana D'Agostino, vadin'ny filohan'ny Antenimieram-Pirenena Venezoeliana. Sary: Globovision
Rehefa nokianin'i Diana D'Agostino, vadin'ny filohan'ny Antenimieram-Pirenena Venezoeliana, ireo vehivavy miasa ao amin'ny governemanta, tamin'ny fiantsoana azy ireny ho “ratsy fitafy, maloto, na mivezivezy eny rehetra eny nefa tsy manao ankosotra,” toa tsy nosaininy mialoha mihitsy hoe ho ratsy ny fandraisana ny fanamarihana nataony rehefa tonga eny anivon'ny vahoaka.
Nataon'i D'Agostino ireo fanamarihany ho setrin'ny kiana natao tamin'ny fisehoana farany nataony navoaka teo amin'ny fono mamiratr'ilay gazetiboky ho an'ny olomalaza. Nantsoin'i D'Agostino ho mpanohana ny Chavisme ireo mpitsikera azy, tamin'ny fitenenana hoe, “nahazo fomba ratsy” amin'ny fampiasàna vehivavy be saritaka. “Tsy toy izany isika vehivavy Venezoeliana,” hoy izy nanazava.
Malaza amin'ny kolontsain'ny fandidiana hanamboarana endrika sy fifaninanana hatsaràna i Venezoela. Vavolombelon'ny fanaovana fandidiana isam-batan'olona hanatsaràna endrika ity firenena ity raha mitaha amin'ny hafa ao Amerika Latina, ary io dia nitarika ihany koa ny faritra ho amin'ireo tranga voatatitra momba ny fisakafoanana tsizarizary. Ao anatin'ny firenena iray izay manana “Miss Universe” tompondaka 13 , mavesa-danja amin'ireo ankizivavy ao Venezoela ny fenitry ny hatsaran-tarehy izay tsy ho takatry ny ankamaroan'ireo vehivavy.
Rehefa nandre ny fanamarihan'i D'Agostino momba izay endrika tokony hananan'ireo vehivavy Venezoeliana, marobe ireo vehivavy ety anaty aterineto no namaly tamin'ny fizaràna ny niainan'izy ireo ny fifandonan'ny idealin'ny hatsaràna amin'ny fahazoan'ain'ireo vehivavy sy ankizivavy.
Raha nanoratra ho an'ny Onda Feminista (Feminist Wave), notsipîhan'i Mariana González ny zavatra hitany ho teboka lehibe ao ambadik'ireo fanehoankevitr'i D'Agostino :
“Tsy toy izany isika vehivavy Venezoeliana.” Ka dia inona marina izany ny vehivavy Venezoeliana izay manana laharampahamehana mavesa-danja kokoa noho ny fanaovana ankosotra? Ny fiainan'iza no tsy mihodinkodina fotsiny amin'ny fisehoana ivelany? Aliens? […] Tsy misy ilàna azy tanteraka mihitsy na ohatra aza ny solontenan'ny governemanta ka tsara fitafy na manao akanjomandry, na manao ankosotra na toy ny vao avy nifoha avy natory. Tsy ny ho toy ny lasibika no asa ilàna azy. […] Ho fanampin'ny maha-mahatsiravina azy, adaladala ilay fanehoankeviny, tsy mitombina ary tena tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny zavamisy iainana.
Ao anaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe For Diana D'Agostino, nizara tantara avy amin'ny fahatanorany ilay artista Yole Quintero, momba ny tolona natrehany mba hanekena azy, ary ny olany tamin'ireo manodidina, ny fitakiana sosialy, ary ny fandidiana hanatsaràna endrika :
… Tsy nitombo hiezaka ny ho marani-tsaina aho. Nitombo tamin'ny fiezahana ho tsara tarehy. Be loatra raha ny marina ka nampietry ny tenako ho amin'ny hadalàna ka tsy handavan'izy ireo ahy. Nody adala, sy lasibika aho. Heveriko fa mora kokoa ny manafina ny haranitan-tsainy noho ny haratsian'ny endriny. Tsy dia manana sary maro momba izay vanimpotoana izay aho, indrindra satria na izaho aza tsy tia nijery ny tenako.
Eo amin'ny 7 taona lasa eo izao, niatrika ny hany fandidiana tokana natrehako nandritry ny fiainako aho […] Nanakalo ny ampahany tamin'ny endriko aho mba hahatsiaro ho tsaratsara kokoa momba ny tenako rehefa mijery fitaratra. Hatsarana, ny hatsaràna no tahotra nanjo ahy. Ary nampalahelo ahy ny nieritreritra betsaka hoe raha mba teraka tsara tarehy mantsy aho, dia mety mba tsy ho nandany vola be, fotoana , ary tsy nijaly.
Anatin'ny iray amin'ireo lahatsorany “Fanadihadiana Hiarovana ny Vehivavy Sembana,” nantitranterin'i Aglaia Berlutti ny tsindry izay niainany manokana teny anivon'ny fiarahamonina Venezoeliana:
Tsy misy olona ivelan'ny Venezoeliana hahatakatra tsara hoe tena toy ny enta-mavesatra no ahatsapan'ny tsirairay io tsindry tsy hita maso io. Tena sarotra ny hanazava amin'ny olona izay tsy nitombo tao anatin'ny fitsaratsaram-poana sy fanaovana tsinontsinona noho ny endrikao ivelany, hoe manao akory izany miaina ao anaty firenena iray izay takiana ny hatsaran'ny endrika, toerana izay ilaina ny maha-tsara tarehy—na inona na inona dikany—ary tena zavadehibe mihitsy aza ho an'ny fahombiazana sosialy.
Avoitran'i Berlutti ihany koa ny fahasarotan'ireo soatoavin'ny hatsaran-tarehy amin'ny maha-ianao anao:
Ary tsy momba ny kolontsain'ny fisehoana ivelany ihany, izay fantatra sy miparitaka manerana ny tany noho ny vanimpotoanan'ny media tia tena sy mihevitra ny hafa ho toy ny zaza, fa koa zavatra hafa saotrarotra ihany koa, maizina, ary mampangirifiry. Satria ao Venezoela ny hatsarana dia famantarana zavatra henjankenjana kokoa zakaina: fomba fijery iray momba ny maha-ianao anao izay mamotika ny maha-izy ny tsirairay. Satria raha tanjona iray, dingana ary fahombiazana ny hatsaràna, izay vitsy no mahatanteraka azy ary mamaritra amin'ny endriny rehetra ny fomba ahatakaran'i Venezoela ny tenany. Na amin'ny teny hafa, fomba iray ijerena ambony ambany ny fahasamihafàna.
Mazava ho azy, tsy ny valinteny tsirairay ho an'ireo fanamarihan'i D'Agostino no miatrika ilay tolona manohitra ny hatsaran-tarehy mamoritra. Ilay tranonkalam-baovao mpihanihany El Chigüire Bipolar (The Bipolar Capybara) dia finaritra tamin'ny fieritreretan'i D'Agostino be loatra momba ny fisehoana ivelany, nametraka ny ahiahiny ho toy ny fandresena lahatra hahazoana fanampiana iraisampirenena :
Tao anatin'ny tafa iray ho an'ny mpanao gazety natao androany, i Diana D’Agostino, ilay mpisolovava sady vadin'ny filohan'ny Antenimieram-Pirenena, dia nangataka fanampiana iraisampirenena avy amin'ny fiarahamonina iraisampirenena amin'ny endrika ankosotra sy fitsofana ho fanamainana.